Esi ewepu foto site na clipboard na gam akporo | Gam akporosis
Na ngwaọrụ ochie ọ nwere ike ime na anyị depụtaghachiri ihe oyiyi na ngwa ma anyị bụ edebewo ya na clipboard n’amaghi ka esi esi puo ya. Dika ozo, nke a adighi eme otutu ihe ozo, ma ewepu n'eziokwu na enwere uzo icho ya n'ime ngwa ka i wee chekwaa ya ma ghara idafu ya.
Ọ bụ ya mere anyị ga-eji kụziere gị otu esi eserese site na desktọọpụ mgbe ngwa ndị ahụ n'onwe ha dịka Clipper na ndị ọzọ, naanị ha na-ejikarị ederede arụ ọrụ. Ọ bụ usoro dị mfe, mana ọ nwere ike ịchekwa gị oge mgbe ọ bịara inwe onyonyo ahụ nke rapaara na ngwa ọrụ ahụ bara uru.
1 Wayzọ mbụ: na Keep
2 Nke abụọ ụzọ: mkpagide
Wayzọ mbụ: na Keep
Mgbe anyị nọ n'ime oge ebe anyị na-agakarị ịkekọrịta ihe oyiyi Iji were ha gaa ngwa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, anyị nwere ụzọ dị mfe iji jigide.
Anyị na-etinye ngwa ahụ Google Nọgidenụ
Anyị malitere ya na anyị mepee ihe edeturu
Anyị jidere ihe ndekọ ahụ ogologo oge dị ka a ga - asị na anyị ga - ede ihe, na anyị họrọ Tapawa
Y’oburu na ihe onyonyo a di na clipboard, ekwesiri igha ya
Anyị ga-enweta ya echekwara na ndetu
Nke abụọ ụzọ: mkpagide
Mpekere bụ a onye njikwa nke ihe niile edepụtara na kiiboodu, ma nwekwaa onwe ya nwere oru iji tinye onyonyo echekwara na kaadị micro SD. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike Tapawa ya ma chebe ya na ohere ọzọ na ekwentị gị.
Ị nwere ike budata ngwa ahụ si ebe a:
Mpekere - Clipboard Manager
Nhọrọ ọzọ bụ iji ihe oyiyi na-edezi ihe oyiyi ịrapara ya n’ebe ahụ ozugbo. E nwere ụfọdụ ndị nrụpụta dị ka Samsung na-enye gị ohere ihu mbipụta 20 ikpeazụ site na ngwa njikwa njikwa ha, yabụ onyonyo ahụ nwere ike ịpụta ebe ahụ.
Na ngwaọrụ Samsung, dị ka 5 Galaxy Note, ị nwere ike ẹkedori dialer na ogologo pịa envelopu na ebe tọgbọ chakoo n’elu nọmba akara ahụ. Nhọrọ clipboard ga-apụta ma enwere ike ịchọta ihe oyiyi dị na ajụjụ ma ọ bụ ederede edepụtachara na mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi enweta foto clipboard na gam akporo
Enweghị m ike ịhụ bọlbụ ahụ
Ee, mana ka esi ewepu ihe nlere?
Zaghachi di na nwunye
Enweghi m ike inweta komboodu ahụ
Sergio Andrade dijo
Ma olee nke ka mma? ??? Na-edebe ma ọ bụ na-egbutu ihe? Enwere m gam akporo 7.0
Zaghachi Sergio Andrade